जोगी जुनै पनि काँधमा झोला भिरेरै आएका हुन्छन है माग्न। नाम हाम्रा बेच्छन्। दाम उनीहरू कुम्ल्याउँछन् विकास योजना देखाएर।
उनले भने,‘के गर्नु हजुर, उतिबेला भावनामा उडेर लोकप्रिय हुन राज्यकोषबाट एक पैसा पनि तलवभत्ता या सेवासुविधा केही लिन्न भनें। पछि आएर त घरखर्च चलाउनै मुस्किल भयो।’
जसले कहिल्यै आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिंदैन अनि एउटा पवित्र घरपरिवारलाई कहिल्यै बिग्रन दिंदैन।
बुद्धत्व नै अन्तिम सत्य हो
यो विश्वमा भगवान् बुद्ध एउटा ठूलो रहस्यमय रूपमा प्रज्ज्वलित हुनुभएको छ। भगवान् त धेरै देखिन्छन्। आफूलाई भगवान् भनाउनेहरू पनि धेरै नै देखिए तर यो संसारमा बुद्धको चेतनाले जुन शिखर छुन सक्यो, त्यस्तो चेतना अन्य कसैसँग देखिएन।
प्रेममान डंगोल ७ जेष्ठ २०७९ शनिबार ६ मिनेट पाठ
न्याय दिन खोजे सकिन्छ
बाटोमा एउटा चौतारी भेटिएछ। दुईजना टुक्रुक्क बसेका रहेछन् त्यहाँ। त्यस्तो ठाउँमा मान्छे भेटिँदा भरोसा नै भयो। सोधेछन् तीमध्ये एउटालाई, त्यही पनि जवाफ आएनछ। तब प्रहरीले नजिक गई कोट्याउँदा पुर्लुक्क पल्टिएछ। छामी हेर्दा त मरिसकेको रहेछ त्यो मान्छे। अर्को मान्छे पनि उस्तै मरिरहेको।
भैरव रिसाल ७ जेष्ठ २०७९ शनिबार ९ मिनेट पाठ
फूल झरेपछि के हुन्छ...
हिंड्दाहिंड्दै कालो पर्दा खस्यो गोधूलिमै,वियोगमा दर्द धेरै थकित घामको लालीलाई कहिले फूल मुस्कुराउने कहिले ओइलाइजाने,जिन्दगीको अर्थ था’छ ओराली र उकालीलाई।
उसले छक्क पर्दै सोध्यो, ‘तपाईं त पालैपालो भन्नुहुन्थ्यो। ऊ त आउनेबित्तिकै पैसा बुझाएर गयो। खास कुरा के हो?’ पिउन दाइले मुसुक्क हाँस्दै भने, ‘एए ऊ त हाकिम साबको आफ्नो मान्छे हो नि त!’
बुद्धि दिने चिर्कटो
फेरि अल्छे जेठो बोल्यो, ‘आज यहाँ आइपुग्दा बुझ्यौं, मागेर संसार चल्दैन। बाँच्नका लागि उत्पादन बढाउनुपर्दाे रहेछ। जे पनि किन्ने गरीब र बेच्ने धनी हुँदा रहेछन्। माग्ने भनेको अशक्त या हामीजस्तै तुइनाम्जे, अल्छे र बुद्धि नभाकाका काम रहेछ।
नागरिक ५ जेष्ठ २०७९ बिहीबार ५ मिनेट पाठ
मैनबत्तीझैं जलिराख्छु, छरिराख्छ ज्योति
मैनबत्तीझैं जलिराख्छु, छरिराख्छ ज्योति,ऊ हो शिक्षक गरिराख्छ अक्षरको खेती। कलमको शक्ति के हो बताउँछ उसले,सच्चा देशभक्ति के हो बताउँछ उसले।
सर! सर!! हाम्रो देशमा नाम चलेका मान्छे छैनन् र? सोवित पर कुनाको बेञ्चबाट उठेर अघिपछिभन्दा भिन्न स्वर निकालेर बोले। उनी अलि फरक जिज्ञासा राख्दै थिए। उनको फरकपनले साथीहरूको अनुहार उनैतिर फर्काएको थियो।
नागरिक ४ जेष्ठ २०७९ बुधबार ३ मिनेट पाठ
‘हैन,बुढा तिमीले त पैसा लिन्नौ जस्तो लाग्याथ्यो।’ ‘यी पैसा धेर भएकाहरू। हामीले मागेका हौं र! छिँडीसम्म आएको लक्ष्मीलाई अवहेलना त गर्नुभएन नि। फेरि नलिए पनि कसले पत्याउँछ र!’
नागरिक ४ जेष्ठ २०७९ बुधबार १ मिनेट पाठ